नेपालमा अकुपंचर उपचार पद्धति लोकप्रिय बन्दै, के के ठीक हुन्छ अकुपंचरबाट ? (भिडियो सहित) | Hamro Doctor News
मंगलबार, ३ मंसिर २०७६ /
यसकारण हुन्छ प्रोस्टेट
लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालको मेसुमा डा. खनाल
रामेछापको मन्थलीमा ओम समाजको निःशुल्क दन्त परीक्षण शिविर
नेपालमा अकुपंचर उपचार पद्धति लोकप्रिय बन्दै, के के ठीक हुन्छ अकुपंचरबाट ? (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय प्राकृतिक चिकित्साअन्तर्गतको अकुपंचर उपचार पद्धति पछिल्लो समय नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यस पद्धतिबाट कसरी रोगको निदान र उपचार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अकुपंचर विशेषज्ञ डाक्टर जया सत्यालसँग कुरा गरेका छौं ।
अकुपञ्चर पद्धति भनेको के हो ?
नेपालमा निकै पछि मात्र भित्रिएको हो अकुपंचर उपचार पद्दति । चिनियाँ पद्धतिको रुपमा चिनिने अकुपञ्चर दुई शब्द मिलेर बनेको छ । अकु भनेको सियो हो । सियोले पञ्चर गरेर वा खोपेर रोग निदान गरिने विधिलाई नै अकुपंचर भनिन्छ ।
अकुपंचर पद्धतिबाट कुन कुन रोगको निदान गर्न सकिन्छ ?
यो उपचार पद्धतिबाट धेरै रोगको निदान गर्न सकिन्छ ।
१.नशा सम्बन्धी रोग
५.नशाको कारण ले लाग्ने पिसाव सम्बन्धी रोग
८.महिलामा महिनावारीको समयमा लाग्ने रोग
९. बढी मोटोपना घटाउन
यो उपचार पद्धति किन राम्रो ?
यो पद्धतिबाट उपचार गर्दा कुनै एन्टिवायोटिक लगायतका औषधिको प्रयोग गर्नुपर्दैन जसले गर्दा साइड इफेक्ट नगन्य मात्रामा हुन्छ ।
अकुपञ्चर पद्धति अवलम्बन गर्नु कुन उमेर समुहका व्यक्तिको लागि राम्रो ?
यो उपचार पद्धति ३५–४० वर्षको उमेरमा गर्नु निकै नै राम्रो मान्निछ । तर पनि रोगको प्रकृति हेरेर सबै उमेर समुहका व्यक्तिले यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यो उपचार पद्धति अवलम्बन गर्दा कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
सदैव विशेषज्ञकोमा मात्र उपचार गराउने । यो उपचार पद्धति निकै संवेदनशील पनि भएकाले जथाभावी उपचार गरे गम्भीर अवस्था पनि आउन सक्छ ।
स्वस्थ व्यक्तिले पनि अकुपञ्चर गर्न सकिन्छ ?
अकुपंचरबारे धेरैलाई भ्रम छ कि सियो घोपेर पनि रोग निको गर्न सकिन्छ र ? तर त्यसो हैन । यो उपचार पद्धतिबाट उपचार गरियो भने केही समय बढी लाग्न सक्छ । तर रोग निको भइसकेपछि पुनः दोहोरिने सम्भावना न्यून रहन्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष निरोगिताको लागि स्वस्थ व्यक्तिले पनि अकुपंचर गर्न सक्छन् ।
Last modified on 2017-06-19 16:27:38
काठमाडौं, ३ मंसिर । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि पसलहरूबाट खाद्य पुरक सामाग्री र डाइट...
पुरुषको पिसाबथैली र लिङ्गको बिचमा रहेको ग्रन्थीलाई प्रोस्टेट भनिन्छ । यो ४० वर्ष...
अचेल मानिसहरू ग्याजेटविना एक मिनेट पनि अलग्गै बस्न नसक्ने भएका छन् । जहाँ जाँदा पनि...
रुपन्देह, ३ मंसिर । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टमा डा....
Dr. Jaya Satyal